Leagoo Alfa 2, izahay no mamakafaka azy amin'ny horonan-tsary ho anao | Androidsis
Herinandro vitsivitsy lasa izay dia notantarainay anao izany fanombohana telefaona vaovao Leagoo, fitaovana miditra afovoany miditra izay misongadina amin'ny vidiny mirary. Hitondra anao aho izao cfandalinana feno ny Leagoo Alfa 2, telefaona misy antsipiriany tena mahaliana.
Ary izany ve ny Leagoo Alfa 2 mampiditra fahalianana tontonana mikasika ny aoriana izay ahafahanao mivezivezy mora foana amin'ireo latabatra samihafa miaraka amin'ny fihetsika tsotra. Ary raha jerena ny vidiny, latsaky ny 80 euro ny vidiny, Mahita fanampin-dranomasina mahaliana aho.
2 Toetra mampiavaka ny Leagoo Alfa 2
6 Ohatra amin'ny sary
Hanomboka amin'ny firesahana aho ny famolavolana ny Leagoo Alfa 2. Ny vatan'ny Leagoo Alfa 2 dia vita amin'ny polycarbonate, zavatra antenaina ao amin'ny terminal misy vidiny mirary toy izany. Asongadino ireo sary manodidina ny telefaona izay manahaka ny aliminioma manome fikitika kely bebe kokoa ho an'ny telefaona.
Ny fepetra Leagoo Alfa 2 X X 143.6 72.6 7.5 MG ankoatry ny fananana lanja 140 grama. Raha jerena ny efijery 5-inch dia fatra fandrefesana io. Mariho fa ny fitaovana dia mahafinaritra ny mikasika azy ary manana fihazonana somary tsara izy, tsy manome ny fahatsapana fa hiala an-tànana izy.
Ny antsipiriany mahaliana iray dia miaraka amin'ny zava-misy fa ny fonony ao aoriana, izay misy ny fakantsary sy ny takelaka fikitika, dia azo esorina hametrahana ilay Karatra SIM SIM na micro SD, fa ny bateria kosa tsy azo esorina.
Eo amin'ny ilany ankavanan'ny Leagoo Alfa 2 no misy ny bokotra herinaratra ao amin'ny terminal ankoatra ny bokotra fanaraha-maso. ny toa maharitra sy mahafinaritra ny fananganana, manome fahatsapana solidity rehefa tsindriana.
Raha eo amin'ny tapany ambony dia ahitantsika ny fivoahan'ny minijack hampifandray headphones, ny lafiny ambany dia natokana ho an'ny port micro USB an'ny telefaona vaovao Leagoo.
Eo anoloana dia mila asongadino ny teknolojia 2.5D an'ny efijeryo , izay miantoka fa ny sisin'ny vera dia miolaka mba hampihenana ny mombamomba azy ireo hisorohana azy ireo tsy hahazo aina amin'ny fikasihan-tanana. Ny antsipiriany iray hafa tena mahaliana dia miaraka amin'ny LED fotsy misy eo ankavian'ny fakantsary, hiaraka amin'ireo selfie miaraka amin'ny jiro fanampiny, ankoatry ny Bokotra an-trano izay natao ho fampandrenesana LED. Sombiny tena mahomby.
Raha fintinina, fitaovana misy a famolavolana tsotra sy famaranana arakaraky ny elanelana misy azy, na dia tsy mifanaraka amin'ny andrasana amin'ny telefaona an'ity karazana ity aza izany, ankoatry ny fanomezana fahatsapana sy fahamafisana mandritra ny fampiasana.
Toetra mampiavaka ny Leagoo Alfa 2
efijery IPS 2.5-inch 5 D misy vahaolana HD (1280 x 720 teboka).
processeur Quad-core MediaTek MT6580 izay mahatratra ny hafainganan'ny famantaranandro hatramin'ny 1.3 GHz.
Fitahirizana anatiny 16 GB azo esorina amin'ny karatra ivelany hatramin'ny 32 GB.
Fakan-tsary Rear Sony megapixel 13 miaraka amin'ny haitao BSI sy taratra LED taratra roa tonta.
Fakan-tsary eo aloha Megapixel 5 misy taratra LED.
Fomba hafa Chip audio natokana / Bluetooth 4.1 / Support SIM Dual / tontonana miverina miverina
Rafitra fandidiana Leagoo 1.1 OS miorina amin'ny Android 5.1 Lollipop.
lafiny X X 143.6 72.6 7.5 MG
vidiny 79.99 euro misy ao amin'ny Coolicool
Ara-teknika ny Leagoo Alfa 2 dia tsotra ary lavitra ny telefaona ambony. Ny processeur quad-core dia manara-dalàna, fa ny faritra RAM kosa dia eo an-tampon'ny taratasy no mihemotra ao aoriana. Fa araka ny nolazaiko, amin'ny taratasy ihany.
Ary ny fahombiazan'ny Leagoo Alfa 2 no nanaitra ahy tsara. Mahatratra ny Isa 23954 ao amin'ny AnTuTu, Ny finday avo lenta vaovao avy amin'ny mpanamboatra aziatika dia niasa tamim-pilaminana tamiko.
Araka ny hitanao amin'ny horonantsary miaraka amin'ity lahatsoratra ity dia afaka nankafy aho lalao isan-karazany lehibe izay mitaky herin'ny sary lehibe nefa tsy mijaly noho ny karazana hadalana na lagika. Mazava ho azy, ny ora famandrihana dia ambony lavitra noho ny nahazatra ahy tamin'ny telefaona premium kokoa
Na izany na tsy izany, hitanao fa niasa mafy i Leagoo ka ny fahombiazan'ny telefaona dia mihoatra ny marina ary efa tsinjoviko fa hihoatra ny filan'ny mpampiasa mpampiasa maro an'isa izany.
Alohan'ny hifindrako amin'ny fizarana lamba dia tiako ny manindry andinindininy iray hafa izay nahagaga ahy: ny mpandahateny Leagoo Alfa 2. Ary ny smartphone Leagoo dia mampiditra feon-kira natokana AW 8737 izay, miaraka amin'ny mpandahateny, manolotra kalitao tsara feo.
Ny efijery an'ny Leagoo Alfa 2 no nahagaga lehibe hafa. ny Ny tontonana IPS 5-inch dia manome vahaolana 1280 x 720 teboka Amin'ny 294 teboka isaky ny santimetatra, kalitao HD izay tokony ho marina.
Fa ny marina dia izay Nahagaga ahy ny vokany. Tadidiko indray fa miatrika telefaona mora be isika ka tsy afaka mampitaha ny kalitaon'ny tontolony amin'ny Super AMOLED na IPS 1080p, fa ny tena marina dia maranitra be ny kalitaon'ny loko, manome gamut miloko somary malalaka. ...
Ny famirapiratana dia mihoatra ny ampy, mamela anao hampiasa telefaona amin'ny tontolo misy anao, na dia mamirapiratra toy inona aza izy io. Ilay tokana fa hitako miaraka aminy ny zoro fijery, somary mahantra raha ampitahaina amin'ny telefaona hafa.
Na dia manana an'io aza ny Leagoo Alf 2 Android 5.1, ny mpanamboatra aziatika dia nampiditra ny lambany manokana Leagoo 1.1 OS. Ny interface dia mitovy amin'ny an'ny mpamokatra sinoa hafa miaraka amina rafitra miorina amin'ny birao, tsy misy vatasarihana fampiharana.
Raha vao zatra an'ity karazana interface ity ianao dia mahazo aina tsara ny fampiasana azy. Amin'ity lafiny ity dia tsy misy hokianina aho satria tsiro ny loko. Asongadino ny zava-misy fa nampiharin'i Leagoo andiana fihetsika izay azontsika atao amin'ny fanidiana ny efijery.
Amin'izany fomba izany, raha ohatra ka manao C amin'ny efijery isika, dia hoentina ho azy ny fakantsary. Nandritra ny fitsapana samihafa dia tsikaritro fa maharitra fotoana fohy ny telefaona rehefa manao ilay fihetsika aho raha oharina amin'ireo modely hafa manana an'ity rafitra ity. Misy zavatra andrasana handinihina ny anao fahatsiarovana RAM voafetra.
Misy antsipiriany iray hafa koa miaraka amin'ny tontonana mikasika eo aorinan'ny Leagoo Alfa 2. Ankehitriny dia lamaody ny fametrahana sensor sensor amin'ny rantsantanana ary nahavita nahita fomba hafa mora vidy i Leagoo hanavahana ny telefaoniny amin'ireo mpifaninana aminy.
Ny takelaka mikasika dia mora ampiasaina, miaraka amina fanazaran-tena kely dia azonao ilay izy mahazo aina ampy handefasana sary na hamohana ny telefaona. Fanampiny tena mahaliana izay manome ny telefaona finday mikasika manokana.
A fa izay hitako dia miaraka amin'ny fahaleovantenan'ny telefaona. Ary raha mampiasa azy mafy ianao dia tsy ho tonga amin'ny alina ny telefaona. Izaho dia zatra manokana amin'ireo findaiko maharitra iray andro sy sasany. Raha ny momba ny Leagoo Alfa 2, rehefa afaka 12 ora dia tonga tany an-trano tany an-telefaonina ny telefaona Bateria 15-10%.
Ity dia iray amin'ireo fizarana izay nandiso fanantenana ahy indrindra. Ny fakantsary lehibe an'ny Leagoo Alfa 2 dia misy solomaso Sony megapixel 13 miaraka amina flash LED roa. Ary, araka ny hitanao amin'ireo sary nalaina azoko tamin'ny telefaona, ny marina dia somary ara-drariny.
Na dia marina aza izany hanafaka anao amin'ny hafainganam-pandeha mihoatra ny iray io, tadidio fa mitondra telefaona miaraka amintsika foana isika, tsy maintsy ekena fa tsy maranitra ny sarin'ireo sary, fa ny ampahany dia omena tsiny noho ny mahantra fanodinana ilay sary.
Marihina fa ratsy indrindra Fakan-tsary mialoha 5 megapixel. Farafaharatsiny mampiditra flash LED izay ahafahanao maka sary mihetsika amin'ny tontolo marefo. Mazava ho azy, amin'ny fiheverana fa ny vidin'ny telefaona dia eo ambanin'ny 80 euro fotsiny, dia aza manantena ny hanana solomaso Leica amin'ity fitaovana ity koa. Araka ny efa nolazaiko teo aloha, ny fakantsariny dia hamonjy anao amin'ny olana amin'ny alàlan'ny fakana azy ireo araka ny elanelana misy azy.
Ny Leagoo dia a Telefaona tena mahaliana ho an'ireo izay te-hanomboka amin'ny tontolon'ny Android ary tsy te hamela vola be loatra. Heveriko ihany koa fa safidy tena mahomby amin'ny telefaona Android voalohany: fitaovana matanjaka izay hahafahanao mankafy lalao video tsy misy olana ary afaka mividy eto fotsiny ianao 79.99 euros.
Tsara ny kalitaon'ny feo
Ny efijery an'ny Leagoo Alfa 2 dia manome fampisehoana mahafinaritra
Ny tahan'ny kalitaon'ny vidiny dia tsy azo resena
Somary miadana ny fakantsary
Fahaleovan-tena voafetra kely
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Leagoo Alpha 2, manadihady ny iray amin'ireo finday Android mora vidy indrindra izahay
Manampy amin'ny fomba ofisialy chatbots ny Facebook
Ho avy tsy ho ela ny fanafihana ataon'ny bot ao amin'ny Facebook Messenger